NAIROBI- Kulan magaalada Muqdisho bishii la soo dhaafey ku dhexmarey madaxda maamulada Soomaalida iyo dowlada Federaalka ah kuwasoo la magac baxay Golaha Amniga Qaranka ayaa
lagu go’aamiyey in guddi 10 xubnood ah kasoo talo bixiyaan nooca doorashadda 2020-ka ka dhacaysa Soomaaliya iyo qodobo kale oo muhiim u ah maasiirka dalka.
Guddiyadaan oo Ra’isal wasaaraha dowlada Federaalka ah dhowaan magacaabey ayaa waxa lagu kooobey iney noqdaan xubno madaxda maamulada iyo dowlada Federaalka soo xushaan kuwasoo ka kooban shaqsiyaad madaxdan aad ugu kalsoon tahay. Xubnahan ayaa maalmahaan shir uga socda magalada Nairobi si ay go’aan uga gaaraan qodobada looga wada hadli doono kulan madaxdaan ku yeelaneyso dhamaadka bishaan xarunta KMG ah ee mamaulka Koonfur Galbeed.
4- Eng Tubaako, Habargidir ( Madaxweynaha Galmudug)
*Burhaan Dio ayaa sida wararka aan ku helyno dalka Canada ugu maqan arimo Qoys iyadoo wararka madax banaan u sheegeen GO in Madaxweyne Gaas ku soo badashay nin la yirahado Cabdirizaq ‘Eelaay’ aad isugu dhow yihiin.
Soo shaacbixista kulamadaan Nairobi uga socda xubnahaan ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shaley qoraal ay soo saareen guddiga dib u eegista Dastuurka KMG ah u qaabilsan Barlamanada Federaalka ah iyagoo sheegey iney kalsoonida kala noqdeen Wasiirka Dastuurka Xoosh kadib markii lagu eedeeyey inuu affuubey howlaha dib loogu eegayo Axdiga Qaranka.
Dib ugu noqoshada nidaamka doorasho ee 4.5 sanadkii 2017 ayaa waxaa xiligaas doorbidayey Madaxweynahii tartanka looga adkaadey iyo Ra’sal wasaarihiisa kaasoo markii dambe musharax noqdey waxayna u adeegsadeen qaadashada nidaamkaaa markale madaxda maamulada oo markaas dhaafsadey dano siyaasadeed iyaga gaar u ah iyo dhaqaale.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay dowaldiisa tan iyo...
Madaxweyne Farmaajo oo daboolka ka qaadey Arin Sir ah
Soomaliya 11.11.2017. 10:19